OBAMA IYO DHAARTA KURSIGA (FAALLO) | Toggaherer's Weblog
OBAMA IYO DHAARTA KURSIGA (FAALLO)
Lessons out of the Evil Israeli Gaza Bloodbath
Posted by: toggaherer on: January 21, 2009
Halyayga madoow ee Baaraak Xuseen Obaama ayaa manta oo 20-Jan-2009 u dheertay madaxweynanimada Dalka maraykanka. Waxa uu kursiga ka bedelayaa madaxweynihii ugu shacbiyada yaraa ee dalka maraykan soo mara kaas oo dhex fadhiisiyay Ummada Maraykan isaga iyo maamulkiisu laba dagaal oo lagu hoogay iyo dhaqaalaha maraykan iyo ka aduunka oo jilbaha uu u dhigay. Waxaana bedelay maanta halyeey taariikh cusub kusoo kordhiyay Dalka maraykan doorashadiisa iyo guud ahaan waliba aduunka.
Milicsiga Obama: Obama ayaa ah wiil asal ahaan kasoo jeeda Aabo Muslim ah oo kasoo haajiray dalka Kenya , Aabihii ayaa ahaa arday wax ka barta dalkaa kana qaatay shahaadada ugu saraysa ee PHD. Obama aqoontiisu waxbarasho waxy tahay sharciyada, waana wiil ay soo koriyeen Hooyo iyo Ayeeyo cadaan ahi. Noloshiisa qayb kamid ahna ku qaatay dalka Indonesia halkaas oo hooyadii ay la deganayd Saygeeda oo dalkaa u dhashay kaasoo guursaday Xuseen Obama kadib.
Obama waxuu ka talaabsaday caqabada aad u badan si uu halkan manta uu joogo usoo gaadho. Caqabadahan ayaa ku qotoma qaar sinjiigiisa, Diinta Aabihii, Asalkiisa, iyo waliba taariikhda oo aan hore loogu arag nin madow oo heerkanka gaadha siyaasada dalkaas. Gaar ahaan midabkiisa madow ayaa ugu muuqday in badan oo dadka maraykanka ah inaanu marnaba hanan doonin suurro galna ahayn in guriga ay isu bedeleen 43 madaxweyne oo caddi uu degi doono wiil madoow oo sinji soo haajiray ku asal leh.
Heerka uu soo gaadhay Baarak Xusen Obama waxa qayb ka ahaa siyaasada fadhiidka iyo guraca garqaadashada la’aantu ku ladhnayd ee madaxweyne Bush ku jujuubayay dadka Maraykan iyo guud ahaan caalamka. Dadka aduunka ugu cabsi badan ayay ka dhigtay dadka maraykan. Waxa intaa dheer in uu Bush ahaa madaxweyne dadka Maraykan had iyo jeer baqdin iyo ka dayrin badan amnigooda ku beeri jiray.
Dhinacan kalana Haweenayda la tartamaysan ee ay ka wada tirsanaayeen xisbiga Dimuqraadiga ahydna haweenay u dhaxday madaxweyne hore ee maraykan waa Clinton-ne , ayaa iyadu afka ciida dartay kadib amarkii ay siyaasad ahaan ku taageertay Dagaalka uu Bush ku qaaday dalka ciraaq oo loo daliishaday Beeno oo la dhoodhdoobay. Dagaalkan oo danta uu Bush ka lahaa iyo waxa shacbiga maraykan u sheegi jiray kaaf iyo kala dheeri ahaayeen. Halka dhaqaalaha dalka maraykana uu marayo meelihii ugu xumaa taariikhda dhow ee dalkaasi, walina aanay muuqan rajo buuran oo ah mid koboc dhaqaale.
Si kastaba ha ahaatee galdaloolooyinka aadka u qotoda dheer ee horyaala Barak Obama ayaa ah qaar baaxad weyn ugana baahan siyaasad hufan iyo qunyar socodnimo xeeli ku ladhan tahay.
Dhinaca dhaqaalaha ayuu Obama ku wacad maray inuu shaqooyin badan abuuri doono isagoo odorosay inuu dalka ka bilaabo dhismo u badan wadooyin , biriijyo, iyo warshado kuwaasoo ula dan leeyahay inuu abuura shaqooyin.
Halka arimaha Dibada oo ah meesha dhaawaca ugu weyni kasoo gaadhay sumcada Maraykan uu ku dabiibi doono inuu bedelo siyaasada seef la orodka ahaydee maamulaka Bush, taas badalkeedna uu qaadan doono siyaasad dabacsan oo qunyar socodnimo. Waxaanu ka dhawaajiayay inuu Dalka Iran wada hadal la geli doono , inkastoo dhinaca dalka Afgaanistaan uu warmo horleh u afaysanayo. Dalkan ayuu u arkaa Obama inuu yahay hoyga laga soo unkay weerarkii lagu eekeeyay dalkaas 11 sep 2001. Dunida Muslimka ah ayuu guud ahaan ugu baaqay in uu la qaadan doono wada shaqayn iyo is qadarin talantaali ah.
Arin ka mid ah caqabadaha gudaha ayaa waxay tahay filashada ay filanayaan dadka maraykanku guud ahaan inuu yahay Obama mucjiso markaba xidid siibaya aafooyinka is barkan ee Bush ay ka dhaxleen. Waxa iyana taas u raacda dadka madow oo si aan kala hadh lahayn u aamisan inuu yahay habeen dhalad Ilaah usoo diray oo naruuro uga noqon doona dhibaha baaxada leh ee ay tirsanayaan. Dadka madow ayaa guud ahaan ka ah tirade guud ee dadka maraykan 13%. Hadana ay ka yihiin 25 % dadka ugu saboolsan, ku dhawaad 40% dadka jeelalka ku xidhan , iyo 10 % dadka ka taga waxbarashada iyagoon dhamaysan. Inanka madoow in la xidho waxa uu itimaal ahaan ka badan yahay 5 jeer wiilka cad.
Gabagabadii , hadalka iyo dhawrsanaanta mudaduu xilkan maanta loo dhaariyay u tartamayay muujiyay Obama ayaa waxa laga sugayaa inuu ficil u bedelo.
Ama Obama-sanoo ifka aayiyo intifaaca ka taga
Ama waxuu noqon Alla doorigii lagu iishayee adhaxda lagaga jabo
Abdifatah Ibrahim Sheekh